Unicode software Download - MYSTERY ZILLION
Unicode software Download
How can I download to unicode software? Where?
Which software ? converter ?
ဘယ် Software မျိုးလိုချင်တာလဲ မသိဘူး - တကယ်လို့ keyboard installer လိုချင်တာဆိုရင် ဖိုရမ်ရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ - အောက်မှာ ဖော်ပြထားသလိုမျိုး ရေးထားပေးတာ ရှိပါတယ်။ အဲ့ကနေ ယူနိုင်ပါတယ်။
MYSTERY ZILLION တွင် English သို့မဟုတ် Unicode ဖြင့်သာ အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။ ဇော်ဂျီ ၊ ဧရာ စသည်တို့ကို အသုံးပြုခွင့် မရှိ။ Unicode Guide ကို http://cl.ly/342K3O34023x1A1O3r1W Download ချပါ။
တကယ်လို့ Converter တွေ လိုချင်တာ ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာ >> http://www.myanmarlanguage.org/unicode/zawgyi-unicode-conversions-tips-tricks-and-risks ယူနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခြား ယူနီကုတ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အသေးစိတ် သိချင်ရင် http://www.myanmarlanguage.org/ နဲ့ http://www.saturngod.net/tag/unicode မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲ့တာတင် မဟုတ်သေးဘူး - http://www.ayarunicodegroup.org/ နဲ့ http://club.ayarunicodegroup.org/ က ဖော်ပြချက်တွေလည်း ဖတ်ထားသင့်ပါတယ်။
keyman နဲ့ myanmar3 (စဉ်)ကိုရိုက်ယင် (စဥ ်)ဒီလိုကြီးပေါ်နေတယ်ဗျာ word မှာပါ
don't use keyman. Please try to use အက္ခရာ ။
Shift+U = ဥ (အက္ခရာဥ)
Shift+N - ဉ (ညလေး)
I want to unicode font software...
You should try to search first. There arealot of Unicode related posts.
ယောက် ကို အရင်ရိုက်၊ ပြီးမှ ယပင့်ရေးချ စသည်ဖြင့် ဆက်ရိုက် "ယောက်ျားလေး"။
အဖြေသာရေးရတာ မေးခွန်းက ၂နှစ်လောက်ရှိနေပြီ။